जापानमा १७ वर्ष देखि यी हुलाकीले किन लुकाए २४ हजार पत्र ? - Lokpath Lokpath
२०७६, १२ माघ आईतवार १४:२५
जापानमा १७ वर्ष देखि यी हुलाकीले किन लुकाए २४ हजार पत्र ?
प्रकाशित मिति : २०७६, १२ माघ आईतवार १४:२५
काठमाडौं । जापानमा एक हुलाकीले हजारौं पत्रहरु लुकाएर राखेको पाइएको छ ।
टोकियोको कानाग्वा शहरमा हुलाकीले करिब २४ हजार पत्रहरु लुकाएर राखेको जापानी अधिकारीहरुले जनाएका छन् । ६१ वर्षीय हुलाकीले आफूभन्दा कम उमेरका हुलाकीले जस्तै काम गरेको देखाउन र सबै पत्रहरु पुर्‍याउन अल्छी मान्दै पत्रहरु लुकाएर राखिएको बताइएका छन् ।
योकोहामा हुलाक कार्यालयले पत्र लुकाइएको घटना सार्वजनिक भएपछि माफी माग्दै सबै पत्रहरु निश्चित स्थानमा पुर्‍याउने बताएको छ । पत्र लुकाउने व्यक्ति हुलाक कार्यालयमा हेड अफ डेलिभेरीका रुपमा कार्यरत थिए । पछि उनले गर्दै आएको काम शंकास्पद लागेपछि उनीसँग सोधपुछ गरिएको थियो । उनले आफूले पत्र लुकाएको स्वीकार गरेपछि उनलाई कामबाट बर्खास्त गरिएको थियो ।
हुलाक अधिकारीहरुले त्यसपछि उनीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । २०१७ देखि गत वर्षको नोभेम्बरसम्ममा करिब एक हजारपत्र हराएको कार्यालयले जनाएको थियो ।
प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा भने हुलाकीले सन् २००३ देखि नै पत्र लुकाएर राखेको पाइएको हो ।
आरोप प्रमाणित भएमा हुलाकीले तीन वर्ष जेल सजाय वा करिब ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
गणतन्त्र दिवसकै दिन भारतको आसाममा चार वटा ग्रिनेड बिस्फोट
ड्रग्स केसमा जोडिए चर्चित यी ५ बलिउड अभिनेत्री
काठमाडौं । सुशान्त सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणमा ड्रग्स केसको अनुसन्धान गरिरहेको एनसीबीले बिस्तारै
नयाँ दिल्ली । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र श्रीलङ्काका उनका समकक्षी महिन्दा राजापाक्षबीच
विश्वभर पछिल्लो सात दिनमा करिव २० लाख कोरोना संक्रमित थपिए
जेनेभा । कोरोनाभाइरस महामारी विश्वव्यापी रूपमा तीव्र गतिमा वृद्धि भएको विश्व स्वास्थय संगठन
कोरोना कालमा भारतका अस्पतालमा अक्सिजनको कालोबजारी
काठमाडौं । कोरोनाको प्रकोप बढ्दै गईरहेका बेला भारतमा अक्सिजनमा कालोबजारी पनि बढ्दै गईरहेको
सचिवालय बैठकपछि नेकपा प्रवक्तालाई प्रश्न : कुलमानको विषयमा के निर्णय…
पूर्वाधार-विकास, लोकपथ हाइलाईट, समाचार
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनलको डिजाइन सार्वजनिक, पर्यटनमन्त्रीले मागे सुझाव
सकिने समयमा मनसुन थप सक्रिय, अझै केही दिन चट्याङसहित वर्षा…